NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Single-Channel ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Cable ကို Workflows များအတွက် Bannister ရေကန်မိတ်ဆက်စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Single-Channel ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Cable ကို Workflows များအတွက် Bannister ရေကန်မိတ်ဆက်စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်
Single-Channel ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Cable ကို Workflows များအတွက် Bannister ရေကန်မိတ်ဆက်စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်
နယူးဆော့ဖျဝဲဖြေရှင်းချက်ကြီးမားသော Multichannel ကွန်ယက်ခေါ်ဆိုခစာတစ်စောင်ဘူတာကနေအားလုံးစစ်ဆင်ရေးကိုဖုံးအုပ်ထား, ဆန်းသစ်စူပါ ticker ဖြေရှင်းချက်များအတွက်အတိုင်းအတာခြုံငုံထင်ဟပ်ရန်အတွက်ဆွေးနွေး
CAMBRIDGE, ON, ကနေဒါ, သြဂုတ် 20, 2014-BL စူပါ tickerမှစ. , ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပလေးအောက်ကိုဖြေရှင်းချက် Bannister ရေကန်, ရှည်လျားကနေဒါ On-ဝေဟင်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အချက်အလက်များ၏လျှပ်စစ်-အစာရှောင်ပေးပို့များအတွက်ဦးဆောင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ Bannister ရေကန်ယခု BL စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်, single-ရုပ်သံလိုင်းသာဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက်စစ်မှန်တဲ့ကြိုးစားခဲ့-and software ကိုအပြည့်အဝဗားရှင်းနဲ့တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်မြောက်အမေရိကပရိသတ်ကိုမှစူပါ ticker ၏လုပ်ငန်းအသွားအလာအတှေ့အကွုံဆောင်ခဲ့သည်။ BL စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်ဟာ့ဒ်ဝဲလျော့နည်းစေပေမဲ့သူ့ရဲ့အရင်ရဲ့အစွမ်းထက်အင်ျဂါရ set ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အဆိုပါထုတ်ခဲ့စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်ခေါ်ဆိုခစာတစ်စောင်ဘူတာနှင့်အခြား Single-ရုပ်သံလိုင်းတီဗီစစ်ဆင်ရေးများအတွက် Multichannel ချဉ်းကပ်ချအနာဆိုး။ မျိုးစုံနှင့်တခါတရံတွင်ပထဝီအနေအထားအရဖြန့်ဝေကစားသမားတစ်ဦးမာစတာ server ကိုမူလစူပါ ticker ဗိသုကာကွန်ရက်များနေစဉ်, စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, Single-box ကိုဖွရှေငျးခ-လျှော့ချဒေသခံတီဗီဘူတာများအတွက် entry ကို၏ကုန်ကျစရိတ်, အတွင်းဖန်တီးမှုအာဏာနှင့်ဒေတာများ-စီးဆင်းမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် localizes cable ကိုလက်လှမ်းလိုင်းများနှင့်အသေးစားထုတ်လွှင့်ကွန်ရက်များ။ စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်လည်းအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအဖြစ်တစ်ဦးက high-quality အဘို့အစမဲ့ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လွတ်လပ်သောအကြောင်းအရာဇုန်, ထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်များစွာသောစားသုံးသူ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးမှထွက်ကစားကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် On-ဝေဟင်ကြည့်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စင်ကြယ်အလိုလိုသိ interface ကိုစောင့်ရှောက်။
"စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်ကြောင်းစူပါ ticker ၏ server overhead ဖယ်ရှား, Multichannel application များအတွက်အလွန်တတ်နိုင်စဉ်တစ်ခုထက် ပို. ရုပ်သံလိုင်းလိုအပ်မသေးငယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်ဘူတာများအတွက်လက်တွေ့ပါပဲ" ဟု Georg Hentsch, သမ္မတ, Bannister ရေကန်ကဆိုသည်။ "စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်ပေါင်းစည်းဖို့ရိုးရှင်းတဲ့သော 3RU ကိုယ်ထည်မှခြေရာလျော့ကျစေပါတယ်။ သို့သျောလညျးကတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်ရန်အတူတူပင်အစွမ်းထက် software ကို leverages စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုဘာမှရိုးရှင်းတဲ့သတင်း ticker မှနိမ့်-တတိယဒေတာ crawls; မျိုးစုံမျက်နှာပြင်ဇုန်ကိုဖြတ်ပြီးတက်ကြွ, ပြောင်းလဲနေသောဂရပ်ဖစ်နဲ့ animations တွေကိုရန်။ "
ခေါ်ရန်စာတစ်စောင်ဘူတာနေဆဲအများအပြားအော်ပရေတာကသီးခြားဂရပ်ဖစ်ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ content စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုဖြတ်ပြီးစူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု, အပြိုင်အဆိုင်စနစ်များထဲကနေစူပါ ticker ခွဲခြားသော Multi-user ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မှုမှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုအသင်းများကိုအလိုအလျောက်ဒေတာပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်အတူမူရင်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းစပ်ဖို့စွမ်းရည်မှတဆင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူရောစပ်မှအကျိုး။ တိကျတဲ့ကြည့်ရှုပရိသတ်တွေ-ထိုကဲ့သို့သောဝင်ငွေ-General စပွန်ဆာမက်ဆေ့ခ်ျများအဖြစ်များအတွက်စိတ်ကြိုက်ထူးခြားတဲ့ BRAND အကြောင်းအရာအတွက်ဖော်စပ်ထားစဉ်ဤလုပ်ငန်းလည်ပတ်လွတ်လပ်ခွင့်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောကို up-to-date ဖြစ်အောင်သတင်း feeds, စတော့ရှယ်ယာ ticker, အားကစားရမှတ်များ, ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်ပိုပြီး၏ပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်သုံးစွဲသူများနိုင်ပါတယ်။
စုပေါင်း, စူပါ ticker နှင့်စူပါ ticker တစ်ကိုယ်တော်သည် dynamically အချိန်-based, အလိုအလျောက် rundown သုံးပြီး output ကိုစကေးကိုက်နိုင်နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်းအတူအကြီးဆုံးကွန်ယက်အရှိဆုံးကျိုးနွံထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းများကနေအစအဆုံးအကုန်ကိုဖုံးလွှမ်း; သို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်အလွန်အထူးလျင်မြန်စွာအစီအစဉ်ကိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြေရှင်းရန်ဂီယာ shift မှအသုံးပြုသူများကို enable ။
Bannister ရေကန်, အသံလွှင့်ရုပ်မြင်သံကြား, Cable ကိုများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုကဂရပ်ဖစ် display ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါသည် ဂြိုဟ်တု ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနဲ့ audio အမြင်အာရုံ applications များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ display ကိုဖြေရှင်းနည်းများကိုဗီဒီယိုဂရပ်ဖစ် display ကိုဒေတာ entry ကို၏လုပ်ငန်းစဉ်ကို automation နှင့်သင့်အဖှဲ့အစညျး၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေခြင်း, သင့်တည်ဆဲအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ Bannister ရေကန်အွန်လိုင်းသွားရောက်လည်ပတ်: www.bannisterlake.com
အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု bannister ရေကန် အသံလွှင်း cable ကို အကြောင်းအရာ ဒေတာ ဂရပ်ဖစ် ထုတ်လုပ်မှု Software များ	2014-08-20
ယခင်: BIRTV 2014 မှာအဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗီနှင့်ရေဒီယို architecture ခင်းကျင်းပြပေးပါရန် GatesAir
နောက်တစ်ခု: DPA မိုက်ခရိုဖုန်း Aspen အော်ပရာပြဇာတ်ရုံရေးစင်တာ၏ Impresario ခဲ့